1 Beresosɛm 12 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Beresosɛm 12:1-40
12 Eyinom ne wɔn a wɔbaa Dawid nkyɛn wɔ Siklag+ bere a Kis ba Saul nti na ontumi nkɔ baabiara+ no; wɔka nnɔmmarima+ a wɔboaa no akodi mu no ho. 2 Wɔyɛ mmarima a wokurakura agyan na wotumi de wɔn nsa nifa ne wɔn nsa benkum+ nyinaa tow abo+ ne agyan,+ Saul nuanom, Benyamin asefo. 3 Nea ɔda wɔn ano ne Ahiesa, ne Yoas a wɔyɛ Gibeani+ Semaa mma ne Asmawet+ mma Yesiel, Pelet, Beraka ne Anatotni+ Yehu, 4 ne Gibeonni+ Yismaia, ɔdɔmmarima a ɔka aduasa+ no ho, na ɔda aduasa no ano; ne Yeremia, Yahasiel, Yohanan ne Gederani+ Yosabad, 5 ne Elusai, Yerimot, Bealia, Semaria ne Harifni Sefatia, 6 ne Kora asefo+ Elkana, Yisiya, Asarel, Yoeser ne Yasobeam, 7 ne Gedorni Yeroham mma Yoela ne Sebadia. 8 Gadfo no bi nso dan bedii Dawid akyi wɔ beae a ɛhɔ kɔ yɛ den no wɔ sare no so,+ mmarima akokodurufo a wɔn ho yɛ den, asraafo a wɔkɔ ɔsa; mmarima a wɔayɛ akyɛm akɛse ne mpeaw krado+ a wɔn anim te sɛ agyata+ na wɔn ho yɛ hare sɛ bepɔw so adowa.+ 9 Eser na ɔda wɔn ano, Obadia na ɔto so abien, Eliab na ɔto so abiɛsa, 10 Mismana na ɔto so anan, Yeremia na ɔto so anum, 11 Atai na ɔto so asia, Eliel na ɔto so ason, 12 Yohanan na ɔto so awotwe, Elsabad na ɔto so akron, 13 Yeremia na ɔto so du, Makbanai na ɔto so dubiako. 14 Eyinom nyinaa yɛ Gad+ asefo, asraafo so mpanyin. Wɔn mu akumaa mpo te sɛ nnipa ɔha, na wɔn mu ɔkɛse te sɛ nnipa apem.+ 15 Eyinom na ɔsram a edi kan no wotwaa Yordan+ bere a na ayiri asram so;+ wɔpam wɔn a wɔtete asasetaw no so kɔɔ apuei ne atɔe. 16 Benyamin ne Yuda asefo no bi baa Dawid nkyɛn wɔ beae a ɛhɔ kɔ yɛ den+ no. 17 Ɛnna Dawid kɔɔ wɔn anim kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ asomdwoe+ so na mobae sɛ morebɛboa me a, ɛnde me ne mo bɛyɛ koma koro.+ Na sɛ mobaa ha sɛ morebeyi me ama m’atamfo bere a bɔne biara nni me nsam+ a, ɛnde yɛn agyanom Nyankopɔn+ nhwɛ mmu ho atɛn.”+ 18 Ɛhɔ ara na honhom+ sii Amasai, aduasa so panyin no so, na ɔkae sɛ: “O Dawid, yɛyɛ wo dea, na w’afã na yɛwɔ,+ O Yese ba. Asomdwoe, asomdwoe na ɛnka wo, na asomdwoe nka wo boafo, Efisɛ wo Nyankopɔn na waboa wo.”+ Enti Dawid gyee wɔn toom, na ɔde wɔn kaa asraafo mpanyimfo no ho.+ 19 Na Manase asefo no bi dan kɔɔ Dawid afã bere a ɔne Filistifo+ reba ne Saul abɛko no; nanso wammoa Filistifo no, efisɛ wɔn ahene+ tuu agyina pam no kae sɛ: “Anhwɛ a ɔbɛsan akodi ne wura Saul akyi, na ɔde yɛn ti atwa so.”+ 20 Bere a ɔbaa Siklag+ no, Manase asefo Adnah, Yosabad, Yediael, Mikael, Yosabad, Elihu ne Siletai a wɔyɛ Manase apem apem so ahwɛfo+ no dan baa n’afã. 21 Wɔn na wɔboaa Dawid ma ɔko tiaa afowfo no,+ efisɛ na wɔn nyinaa yɛ nnɔmmarima+ a wɔn ho yɛ den; wɔbɛyɛɛ asraafo no so atitiriw. 22 Ade rekye a ade resa nyinaa na nkurɔfo reba+ Dawid nkyɛn bɛboa no. Ɛyɛɛ saa kosii sɛ afei wɔbɛyɛɛ dɔm kɛse+ te sɛ Onyankopɔn asafo.+ 23 Mmarima a wɔkɔ ɔsa a wɔbaa Dawid nkyɛn wɔ Hebron+ sɛ wɔde Saul ahenni+ no bɛma no sɛnea Yehowa asɛm+ kyerɛ no dodow na edi so yi: 24 Yuda asefo a wokurakura akyɛm akɛse ne mpeaw, wɔyɛ mpemnsia ahanwɔtwe a wɔkɔ ɔsa. 25 Simeon asefo mu, asraafo nnɔmmarima a wɔn ho yɛ den, mpemnson ne ɔha. 26 Lewi asefo mu, mpemnan ahansia. 27 Yehoiada na ɔda Aaron+ asefo no ano,+ na nnipa mpem abiɛsa ahanson ka ne ho. 28 Aberante ɔkokodurufo Sadok+ ne n’agyanom fiefo nso, wɔyɛ atitiriw aduonu abien. 29 Saul+ nuanom, Benyamin+ asefo, wɔyɛ mpem abiɛsa; ɛde besi saa bere no na wɔn mu dodow no ara rewɛn Saul fie. 30 Efraim asefo mu, mpem aduonu ne ahanwɔtwe, nnɔmmarima a wɔn ho yɛ den,+ mmarima a wɔwɔ din wɔn agyanom abusuafie. 31 Manase+ abusuakuw fã nso, nnipa mpem dunwɔtwe na wɔbɔɔ din somaa wɔn sɛ wommesi Dawid hene. 32 Isakar+ asefo mmadwemma a wohu nea ɛreba+ na wonim nea ɛsɛ sɛ Israel yɛ+ no yɛ atitiriw ahanu, na wɔn nuanom nyinaa tiee wɔn. 33 Sebulon+ asefo mu, wɔn a wɔkɔ ɔsa na wɔde akode nyinaa bi kɔ mpasua so yɛ mpem aduonum; wɔn na wɔboom de koma koro baa Dawid nkyɛn. 34 Naftali+ asefo mu, atitiriw apem, na nnipa mpem aduasa ason a wokurakura akyɛm akɛse ne mpeaw ka wɔn ho. 35 Dan asefo mu, wɔn a wɔkɔ ɔsa yɛ mpem aduonu awotwe ne ahansia. 36 Aser+ asefo mu, wɔn a wɔkɔ ɔsa, na wɔkɔ mpasua so yɛ mpem aduanan. 37 Ruben ne Gad asefo ne Manase abusuakuw fã a wɔwɔ Yordan agya+ no mu, wɔn a wɔde akode nyinaa bi kɔ ɔsa yɛ mpem ɔha aduonu. 38 Eyinom nyinaa yɛ mmarima a wɔkɔ ɔsa, wɔbom kɔ mpasua so; wɔde koma a edi mũ+ baa Dawid nkyɛn wɔ Hebron besii no Israel nyinaa so hene; na Israel nkae nyinaa de koma koro penee Dawid so sɛ ɔhene.+ 39 Na wodii Dawid nkyɛn nnansa; wodidii na wɔnomee+ efisɛ na wɔn nuanom asiesie wɔn akyi. 40 Na wɔn a wɔtete bɛn hɔ de kosi Isakar+ ne Sebulon+ ne Naftali+ nyinaa de nnuan guu mfurum+ ne yoma ne mfurumpɔnkɔ ne anantwi so bae; esiam+ nnuan ne borɔdɔma a wɔabɔ no atɔwatɔw+ ne bobe tetare+ ne bobesa+ ne ngo+ ne anantwi+ ne nguan+ bebree pa, efisɛ na anigye+ aba Israel.
1 Beresosɛm 12